Donald Trump naHillary Clinton vose vana vaharahara? : Martin Vrijland
Donald Trump naHillary Clinton vose vana vaharahara?
Akaiswa mukati NHOROONDO	by Martin Vrijland	pa 18 May 2016	• 33 Comments
Muzvinyorwa zvangu zvekupedzisira ndakazvitaura kakawanda, ndezvekuti nyika ichiri kushandiswa nekare yepaharaar bloodlines. Zvichida iwe uchafunga "Aa, chii chinokuita iwe munhu anotambudzika!"Asi zvakakodzera kukosha, nokuti ipapo iwe unonzwisisa kuti nhoroondo, mharidzo uye remangwana zvakabatana sei. Iwe uchazoonawo kuti inguva chaiyo yekubuda muimba yako yechigaro uye kutora matanho. Mifananidzo iyo inoparidzirwa inhau ndeyokuti kune hondo inotyisa inowanikwa mu. . .
Kuti uenderere mberi nekuverenga ichi chinyorwa kana kutora chikamu mukukurukurirana maforamu, iwe unogona kuve nhengo nekudzvanya pane iro 'rako tsigiro' bhatani. Izvi zvichakupa iwe kuwana kune yakasara yeichi chinyorwa uye foramu uye kutora chikamu mukurwira nyika iri nani. Iwe unogona ikozvino kutora chikamu pakarepo. Iwe watove nhengo kubva € 5 / mwedzi uye saka nditsigire kuti ndirambe ndichirwira rusununguko rwako.
Tags: zvizvarwa, aristocracy, bloodline, ropalines, Donald kwehwamanda, Farao, pharaonic, pharaonic, Featured, hillary clinton, cold frozen, presidents
« Bvisa hurumende yeEurope yakatonga! Kutanga Brexit, ipapo Nexit!
Ndege yeEgyptaic MS804 kupandukira kwegandanga kune vagari vemunharaunda, asi kunyanya pamusoro pevanhu veEgipita »
Kushanya kwakazara: 4.080.043
Martin Vrijland op Bhuku idzva Martin Vrijland rakanzi 'Coronavirus covid-19 izvi zvinopera kupi?' iripo ikozvino
Harald Pfeiffer op Bhuku idzva Martin Vrijland rakanzi 'Coronavirus covid-19 izvi zvinopera kupi?' iripo ikozvino
Marianne op Bhuku idzva Martin Vrijland rakanzi 'Coronavirus covid-19 izvi zvinopera kupi?' iripo ikozvino
ClairVoyance op Svondo June 28 kuratidzira Malieveld rudo, kutsungirira uye kuvimba kuchengetedza mambure eVirus Madness